Marketing Manager for Myint Myat Kyaw Group of Company Limited. | Job in Myanmar
Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - Sales & Marketing Jobs - Trading
To beafront-runner company in the field of construction industry, MMK aims toamass production of construction materials by the establishment of production facilities using sophisticated technology so as to provide better quality products with affordable and reasonable price.
To grow sales volume in double through qualified technical and commercial human resources of the Company.
As Myanmar is moving withamomentum towardsadeveloping state in the region of South East Asia, MMK needs toagreater extend of buildings and dwellings in the economic andsocial sectors.
A few years passed by MMK Trading Company, MMK Industry Company and MMK Service Company were also formed asasister companies inaview to provide better support to the MMK Construction.
MMK's business activities include
•	တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တခုခုရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရပါမည်။
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၅နှစ်အထက်ရှိရမည်။
•	English4Skill ကောင်းမွန်ပြီး Marketing plan ဆွဲနိုင်ပြီး Team တစ်ခုလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
•	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
No-(527-529)၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။
•	Quality Check,Control,Project Plan,Site inspecton,Time Schedule, Safety and Quality Management ကိုကျ� ...
•	Project Plan,Site inspection,Sub-Contract များနှင့် Staff များအား Management ပြ� ...
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်� ...
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးအသင်းအဖွဲ့နှ� ...
•	ငွေစာရင်းအသွင်းအထုတ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Bank � ...
•	၀န်ထမ်းများစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်အောင် ပ့� ...
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့နှ� ...
Date Posted: 31/7/2019
•	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	� ...
•	စကားပြောချိုသာပြီး Customer များနှင့် ကောင်းမွ ...
•	ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ စက်ရုံများသို့စစ� ...
•	HR Policy, Procedure များ Pay Roll System များကို ကျွမ်းကျင်စွာေ� ...